Dzivisa matambudziko kana uchimomesa pendrive neFAT kana exFAT | Ndinobva mac
Paul Aparicio | | OS X Shumba yeShumba, Tutorials
Kana iwe ukandibvunza kuti ndeipi fomati yakakwana yedrivhu rinobviswa, ini ndaizofanira kufunga nezvemhinduro yangu uye ndaizopedzisira ndagadzira imwe: Yakakwana yei? Chokwadi waizondipindura kuti uchengete data, asi ndinoreva kuti makomputa ayo pendrive ari kuzoshandiswa Dambudziko nderekuti pane Mac, Windows neLinux uye havazi vese vanogona kuverenga kana kunyora mune ese mafomati. Zviripo mafomati maviri epasirese: FAT uye exFAT.
Saka chii chikumbiro changu? Ini ndinazvo zvakajeka, asi kutanga isu tinofanirwa kutsanangura zvishoma pamusoro apa kuti ndeapi mafomati acho. Kana tichizoshandisa a pendrive pane chero komputa Zvisinei nesisitimu yako yekushandisa, hazvingabatsiri kumisikidza dhiraivhi mune fomati isingatsigirwe neumwe wavo. Pazasi isu tichatsanangura kuti fomati yega yega inoshandiswa sei.
1 Mhando dzemhando
1.2 Mac OS X Uyezve
2 ExFAT kana NTFS
3 Maitiro ekuomesa pendrive mu exFAT
Chimiro NTFS (New Technology File System) yakagadzirwa neMicrosoft muna1993 yehurongwa hwekushanda kwayo. Pasina kupinda mune zvakadzama zvakawanda, isu tinofanirwa kuyeuka kuti Mac OS X inogona kuverenga, asi kwete kunyora, pane dhiraivhi yakarongedzwa muNTFS. Pasina kuisa maturusi echitatu-bato, isu hatizokwanise kumisikidza pendrive muNTFS kubva kuMac uye, kana tichida kuishandisa pakombuta yedu tisingafanirwe kuisa software isingadiwe (sekutsanangura kwatichaita gare gare), zvakanakisa kusatomisa peni yedu inotyaira muNTFS.
Kana iwe uchida kushandisa iyo NTFS fomati, iwe unofanirwa kuziva kuti kune echitatu-bato maturusi ayo anopa OS X kugona kuverenga nekunyora kuNTFS, senge Paragon NTFS kana Tuxera NTFS. Asi, ini ndinoomerera, hazvina kukosha kana tichifunga kuti kune mamwe mafomati epasirese.
NTFS inoshanda nemazvo kune akaomarara anotyaira pamakomputa achishandisa Windows sisitimu inoshanda.
Mac OS X Uyezve
Kupfupisa, tinogona kutaura izvozvo Mac OS X Uyezve Izvo zvakafanana neNTFS, asi mune ino nyaya zvese zvakagadzirirwa Apple's desktop operating system. Kana isu tine pendrive iyo yatiri kuzoshandisawo muWindows, haina kukodzera kuimisa muMac OS X Plus nekuti haizokwanise kuwana data rayo. Zvirinani kushandisa imwe yeanotevera maviri sarudzo.
Mac OS X Uyezve inofanira kushandiswa chete pane zvakaoma dhiraivha iyo OS X inofanira kuiswa.
Yakagadzira yayo yekutanga vhezheni muna 1980 uye yekupedzisira (FAT32) muna 1995, zvinogona kutaurwa kuti FAT (File Allocation Tafura) ndiyo inonyanya kufambisa faira system. Inogona kushandiswa kunyangwe pazvishandiso senge consoles, mobiles, nezvimwe, asi iine dambudziko hombe kana isu tichingoda kurishandisa pakombuta makomputa: iyo yepamusoro inotsigirwa neFAT32 iri 4GB. Kana, semuenzaniso, tine vhidhiyo ye5GB uye FAT-yakarongedzwa pendrive, tichava nesarudzo mbiri: kungava kupatsanura iyo faira muzvikamu zviviri kana kuisiya payanga iri nekuti hatizokwanise kuiisa muPendrive yedu.
Dhawunirodha emahara mafirimu pane iPhone kana iPad
Sezvandambotaura pamusoro apa, FAT, FAT16 uye FAT32 inongofanira kushandiswa chete pamadhivhuru anobviswa atinoda kushandisa, semuenzaniso, mu iyo Sony PSP kana ndangariro dzemakamera.
Pakupedzisira isu tine fomati exFAT (Yakawedzerwa Faira Kugovera Tafura), shanduko yeFAT32. Yakagadzirwawo neMicrosoft uye inoenderana kubva kuChris Leopard zvichienda mberi uye kubva kuXP zvichienda mberi, asi pane misiyano yakakosha kubva mushanduro yapfuura, senge saizi yepamusoro yefaira mu exFAT inova 16EiB. Pasina kupokana izvi Ndiyo sarudzo yakanakisa Kana isu tichida kushandisa pendrive paWindows, Mac neLinux makomputa, kunyangwe iyo yekupedzisira isingagone kumisikidzwa isina kuisa software.
Isu tinoshandisa exFAT kumisikidza chero yekunze hard drive kana pendrive yatinoda shandisa kunyanya paMac uye Windows. Kana tichifanira kuishandisa pamidziyo yakadai senge zvataurwa pamusoro kana makamera, isu hatizoshandisa iyi fomati.
ExFAT kana NTFS
Kana iwe uchizeza pakati peExFAT kana NTFS, zvichibva pane zvatichangoona, chinonyanya kufunga ndechekuomesa pendrive kana yekunze memory unit mune ExFAT fomati sezvo iriyo sarudzo inovimbisa kuenderana kwakaringana, kunoenderana neese aripo masisitimu anoshanda.
Maitiro ekuomesa pendrive mu exFAT
Vaya venyu vasina kumbonzwa nezve fomati iyi, musatya. Kugadzira dhirairi rakaomarara, rekunze kana USB pendrive paMac iri nyore kwazvo uye maitiro haachinje zvakanyanya kana izvo zvatiri kuda kuzvimisa muEFFAT. Asi, kuti tirege kuvhiringidzika, ini ndichatsanangura matanho acho:
Tinofanira kuvhura iyo Disk zvinoshandiswa. Pane nzira nhatu dzakasiyana dzekuiwana: kubva kuLaunchpad, zvinova ndezvaunazvo muma screenshots, kupinda muApplication / Vamwe / Dhisiki Utility dhairekitori kana, wandinoda, kubva kuSpotlight, iyo yandinowana nekuisvinira iyo Nguva iyo CTRL + Spacebar mabhatani.
Kamwe mune dhisiki zvinoshandiswa, tichaona mufananidzo senge iri mukutora. Tinobaya pane yedu yuniti. Iko hakuna kubaya pane zviri mukati meiyo unit. Ndicho chete chikamu chinenge chiripo, saka zvimwe zvinozoonekwa kana tiine zvimwe zvikamu. Sezvo zvatiri kuda kurongedza zvese, isu tinosarudza mudzi.
Tevere, tinobaya Delete, inova yakaenzana nekuomesa muWindows.
Isu tinofukura menyu uye sarudza exFAT
Chekupedzisira, tinobaya pa «Delete».
Ini handina fomati chero chinhu muNTFS kwenguva yakareba. ExFAT ndiyo fomati yeangu ese madhiraivha ekunze uye ikozvino iwe unogona kuita zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X Shumba yeShumba » Fomati pendrive neFAT kana exFAT system
Antonio Castellano akadaro
Zvaive zvakajeka kwandiri. Kubva ikozvino zvichienda mberi ini ndichakwanisa kushandisa iyo pendrive mune akasiyana mashandiro masystem nerunyararo rwepfungwa. Zvinyorwa zvakanaka kwazvo naD. Pedro Rodas.
Pindura kuna Antonio Castellano
Peter Rhodes akadaro
Ndatenda, Antonio. Ndinokukurudzira kuti utevere zvandatumira.
Ernesto Gonzalez akadaro
Kutenda, iro zano rakanaka uye rinonyanya kubatsira kune vanhu vane matambudziko ekumisikidza.
Pindura kuna Ernesto González
Mhoroi, masikati machena, kubva kuMexico, ndine hard drive uye ndinoda kuidzima uye kuimisa mac uye windows, asi pane mac iyo EXFAT fomati haioneke, kuipa iyo fomati kana ini ndobatanidza yangu yekunze hard drive , zvinongondipa sarudzo mac mafomati
Ndinovimba munogona kundibatsira. maererano
Chimwe chinhu chinonakidza kwazvo nezve kuomesa dhisiki rekunze mu exFAT ndechekuti OS X inogona kuinongedza uye nekudaro inobvumira kutsvaga nekukurumidza pamwe neSpotlight.
Kutenda nemupiro Héctor.
Imwe yemabhenefiti makuru eiyo exFat fomati. Ndatenda Hector!
Chinhu chega chekuisa mupfungwa ndechekuti exFat haienderane neWindows XP, kunyangwe paine chigamba chayo.
Chokwadi Atonio, Windows XP inoda gadziriso kuti ikwanise kubata mafaira eFFAT, aunogona kurodha pasi kubva. Ndatenda nekutaura kwako.
Zvinobudirira. Iwe unofanirwa kurodha chigamba kuti chimhanye. Ndatenda nekuisa!
Ndiri kuenda kuumbiridza 1TB yekunze hdd kune exfat fomati, ndeipi saizi yekugovera unit ini ndinoipa iyo?
Uri kuenda kushandisa makuru mafaera? Kana zvisiri, ini ndinokurudzira kuimisa muMS-DOS kuitira kuti diski iyi ienderane neWindows uye OSX.
Ndine kusahadzika kwakafanana nokwako shamwari
Chinhu chakashata chete ndechekuti yekumhanyisa kumhanya inodonha zvakanyanya, yakabva pamaminetsi gumi neshanu kusvika makumi maviri neshanu mu15-chimwe chinhu GB faira):
Wataura chokwadi nezve izvo. Chinja kumhanya kunodonha zvakanyanya.
Unoitika here kuti nei uchinditorera anopfuura maminetsi makumi maviri neshanu?
uye kana iwe uine chero yapfuura ios senge yangu kesi ini ndine 10.5.8 ??? Chero software ??
Mushure meKupa FOMATI IYI, USANDITSVIRA USB yeTV ... ...? ¿? ¿? ¿?
Pindura kuna josele
SaJosele, kana Toshiba 1TB hard drive yaitirwa Exfat, inozivikanwa nemacomputer ese, ini ndinogona kusevha mafirimu pamusoro pe4Gb, asi iyo LG terevhizheni haina kuiziva, ndiko kwandinoona mafirimu nezwi kubva yangu odhiyo sisitimu uye skrini yemhando yakanaka. Ini handizive zvekuita, kana kurodha mafirimu nefoni yangu, kana kuti handizive zvekuita kuti terevhizheni izvizive.
Ndiri kuda kuzvigadzirisa nekuti ini handikwanise kushandisa iMac kurodha pasi nekuti ipapo handigone kuzviisa paTV… Uye kutenga Apple TV kuti ndivaone haisiyo mhinduro nekuti ini ndine hard drive yeiyo.
Mumwe munhu angave neTV LG42LB630V kana yakafanana uye otitaurira kuti akaigadzirisa sei?
Ini ndiri munzvimbo imwechete seye mudiwa, iyo yakafanana LG TV modhi uye hazvindibvumidze kutamba chero chinhu kubva pendrive.
Ini ndinofunga pachave nemhinduro imwe kunze kweapuroTV kana kuve nekutsvaga windows system chete yeizvi.
Rigadzirise nekushandisa multimedia hard drive kana pendrive yekuona mafirimu paTV, uye kudzikisira kushandiswa kwedhiraivhidhi yako kugadzira mabhakuki, kana zvinopesana.
Ini ndinofunga kuti kana iwe ukashandisa rekunze dhiraidhi seyese-inotenderera, inozogara zvakanyanya kushoma. Ini ndinoshandisa iyo kuchengetedza chete.
Ndine iyo yekunze DD muExFat uye ini ndine Western Dhijitari multimedia (isina yemukati hard disk, chete kesi) yekuona zvinhu paTV. Ini ndinobatanidza iyo DD mune multimedia uye haina kana kundiwanira chero ini zvachose. Chinhu chakanyanya kushata ndechekuti ini ndakamboedzawo ne multimedia kubva kumhuri neshamwari uye ini ndichiri kuishandisa.
Rako ruzivo rweEexFat rwakandibatsira kwazvo kubata yangu Toshiba ext disk muWin naOsx
Ye LG TV, iwe zvakare une mukana wekutarisa kuburikidza neye media share, nekuisa iyo Universal Media Server pakombuta yako uye kuiona kuburikidza nekushambadzira.
Ruzivo rwako rwakajeka uye rwakabatsira kwazvo kwandiri. asi ndine dambudziko, ndine dhirairi rekunze muFAT32, asi pandinoda kudzima mafaera anoaendesa kumarara asi hazviite kuti ndiburitse marara nekuti anoti handina mvumo inodiwa. Ini handizive kuti ndoita sei izvi, ruzivo rwuri pane rakaomarara disk runondiudza kuti runogona kuverenga nekunyora. Ndokutenda zvikuru
mhoro, uye neakakora mafuta faira fomati ndinogona kubatanidza hard drive yangu kuTV kana kumba theatre kuti ndione mafirimu uye inoverengwa zvakajairika? Ini ndinoshandisa windows uye osx el capitan
Ramiro Fernandez plain akadaro
Mhoro, fomati kubva kuMAC mune exFat, asi zvakadaro windows haizvione. Ini ndinomisikidza mumahwindo mu exFat, asi inogadzira chidimbu chidiki che200 MB hapana chimwe chinhu! HAUONI kuona yasara 15800MB yepeni ye16GB, nei izvozvo zvichigona kuitika? Iko kune iko kunyorera kuti uite yakaderera nhanho fomati paMAC?
Pindura kuna Ramiro Fernandez llano
bvunzo neiyo MBR partition system kana iwe ukaipa iyo fomati nyowani (sarudza mune yepasi tebhu pane iyo exFAT fomati)
bvunzo ne MBR tenzi boot rekodhi system
Antonio Salcedo Gonzalez placeholder mufananidzo akadaro
Ramiro zvimwechetezvo zvinoitika kwandiri, unogona kuzvigadzirisa?
Pindura kuna Antonio Salcedo Gonzalez
Dambudziko rangu nderekuti neEFFAT tv haiione .. Pane anoziva?
Mhoro. Ndine LG TV uye ndakagadzira dhiraivha yangu yekunze kuenda kuFFAT asi terevhizheni haichazvizive… Pane mazano? Ndatenda.
Ini ndinoita izvi uye mumahwindo ini ndinongoziva chikamu che200 MB uye zvinondiudza kuti ndinofanira kumisikidza zvakare!
Mhoro vanhu, ini ndine MacBook Pro, ini ndinomiririra pendrives angu muMS-DOS FAT kuti ndikwanise kuteerera mimhanzi pane mp3 zvigadzirwa zvemutinhimira asi vamwe havazvizive, chii chaunokurudzira, chichava nekuda kwezvikamu? Chinhu chisingazivikanwe ndechekuti ndakavateerera paSONY michina uye ndobva ndarekodha mimwe mimhanzi uye iwo iwoyo mudziyo hauvazive. Ndatenda!
NDATENDA NENZVIMBO YAKO, ASI NDINOGONESESA: KANA NDICHIDA KUGADZIRA PENDRIVE YEMAHARA 16 GB NA 3.0. KANA NDIKASHANDISA NTFS PASI PASI, ZVINondipa KUTI NDISARUDZE ZVINODZIDZISWA ZVAKAWANDA MU «KUGADZIRA UNIT SIZE», INANDIGADZIRA NEMAHARA 4096 BHITI. NDATENDA.
Mhoroi, ndinoda kuti mundibatsire .. tione kana izvi zvamboitika kwauri uye kuyedzwa nemafaira ese efaira uye pandakazviisa mumota usb inondipa kukanganisa, pane chero munhu anoziva nefomati yekuimisa?
Iyo yakajeka, yakazara kwazvo, inobatsira uye yakapusa tsananguro! Yakandibatsira zvikuru! Ndatenda
Mhoro, pandinoita izvi, zvinodzima zvese zvirimo mune rekunze dhisiki? ndatenda
Ini ndichangobva kuvandudza mac yangu kuMAC OS SIERRA uye pandinoteedzera mimhanzi mupendende, haina kurira mune chero mumhanzi player, ndinoidzima ne diski zvinoshandiswa muEX FAT uye haina kurira futi, chii chandingaite, kubvira zvakandishandira zvakanaka
Ndinovimba nerubatsiro, ndinokutendai
Wakadii hako? Ndakaverenga nyaya yese zvakanaka chose nekutenda neruzivo rwakanaka kwazvo, Muhupenyu hwangu ndichataura maonero angu nekuti ndakamhanya mumamiriro akafanana neWindows, Mac, Smartv.
Iyo Smartv iyo ingangoita fomati chete iyo yavakaverenga ndeye NTFS kana FAT, ruzivo nderekuti mabhaisikopo anochengetwa ehunhu hwakanaka anodarika magighi mana pane ari FAT fomati, mafaera akakura kupfuura mana magig haagone.
Mac fomati yeNTFS inoverengwa chete, asi kana uine dhisiki remamuvhi unogona kuritamba asi usinga wedzere / kudzima mafaera.
Zvandinoita ndezvekuti: Ndine rekunze dhisiki randinaro nezvikamu zviviri.
Chikamu chekutanga chikuru muNTFS uye Zvakakosha kuti ndicho chekutanga kuitira kuti Smartv vazvione zvakajairika uye vakwanise kuona mabhaisikopo.
Chikamu chechipiri cheFFAT chidiki chidiki pane chandinoshandisa muMAC kana Windows kwandinoita mabhakiti kana kuchinjana mafaera Uye saka mashandiro maviri anokwanisa kudzima / kuverenga mafaera pasina matambudziko, Zvakare nechikamu cheNTFS ndinogona kuwedzera / kudzima mafirimu uye kuvatarisa pasina matambudziko paSmartv.
Dhisiki ini randinoshandisa ndi1 Tera uye ndine Chikamu chekutanga chakatenderedza mazana manomwe emadhigiramu NTFS mafirimu uye Chikamu chechipiri mazana matatu gigs approx exFAT yekuchengetedza faira nezvimwe. Kwaziso.
Sarudzo yakanaka, chinhu chega ndechekuti kana ukadzora mafirimu pane mac yako, unogona chete kuendesa kune rekunze dhisiki muiyo exFat partition, nekuti muchikamu cheNTFS inoverengwa chete, saka kuti ugone kuvaona pane smart TV kubva kuLG unoda Windows pc yekuendesa iwo mafirimu kubva kuExpat partition kuenda kuNTFS ...
Chero zvazvingaitika ndatenda nezano iri 😉
Freddie gonzalez cortez akadaro
Tenga USB flash drive FLASH DRIVE 2.0 128 Gb inoti butiro rayo kuti rinoenderana nemawindows, ini ndine windows 7 nyanzvi, iyi pendrive kana ikaverenga izwi rekuti mafaira, iri nani asi isingatambe mavhidhiyo kana mafirimu ichifunga kuti inochengetedza ivo uye Ivo vanotora nzvimbo, saka iri pane iyo pendrive asi haina kutamba mavhidhiyo chero muWMV uye VLC.
Ndiri kuita chimwe chinhu chisina kunaka here?
Unogona kundibatsira ndapota?
Pindura kuna Freddie Gonzalez Cortez
Mhoro zvakanaka, tarisa, ndatenga 3tb Toshiba hard disk uye pandinozviita chete muFAT inochengeta iyo 3Tb asi pandinoifomata muEx-Fat inondiudza kuti nzvimbo iripo i800Gb, chii chandingaite?
Mhoro husiku hwakanaka, ndine mutambi wemultimedia, uye pandakabvisa mafirimu andaive nawo, handizive zvandakaita kana chii chakaitika manje mutambi paasina kundiziva, mumwe munhu anogona kundiudza zvekuita kuti ndiwanezve, Ini zvakare ndakapedzera pendrive, ndatenda.
Mhoroi, hei, ndine dambudziko, pamwe ndanga ndisinganzwisise zvakanaka kana kuti handizive, asi ini ndakamisikidza USB yangu neEx-Fat uye izvozvi hapana kana masisitimu anoshanda anozviona ... kana iwe ukandiudza chikonzero , Ndingafarire kwazvo.
Ini ndinofanira fomati dhisiki rekunze, uye pandinosarudza exFAT mumawindo, zvinondibvumidza kuti ndisarudze kubva pa128 kilobytes kusvika pa32768, ndeipi yaunokurudzira kusarudza kukwidziridza nzvimbo yangu kusvika pakakwirira?
formatie pendrive nekuwedzera exfat asi windows pc haandizive, ndingaigadzirisa sei kana chii icho?
Fabian A. akadaro
Yakanaka posvo kune vedu vedu vasingazive zvakawanda nezve izvi zvinhu.
Pindura kuna Fabian A.
JAVIER MARTINEZ akadaro
Ndakavandudza Imac yangu kuenda kuOx High Sierra. Zvese zvakanaka musimboti. Asi kana ndichishandisa pendrives uye ekunze ma disks anda fomata muFAT32 kuti ndiashandise mune chero sisitimu inoshanda, hazvindibvumidze kupfuudza mafaera anopfuura 2GB kana kusvika panguva iyoyo zvaindibvumidza kupfuudza mafaera anosvika ku4GB. Ini ndakatozvimisikidza zvakare kubva kuDisk Utility, asi dambudziko rinoramba riripo. Ini handizive kana mumwe munhu ari kuitika zvakafanana uye ini handikwanise kuzvigadzirisa.
Pindura kuna JAVIER MARTINEZ
Akanaka Javier, wawana mhinduro here? Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri uye handimuwani, ndatenda
Jose Luis Picazo Cantos akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, ndadaidza AppleCare Kudzivirirwa kwePlan chirongwa uye havana zano. Saka sezvo ini ndichigadzirisa kune macOS Yakakwira Sierra 10.13.2 Ini handigone kuteedzera mafaera akakura kupfuura 2GB muFat32.
Pindura José Luis Picazo Cantos
Akanaka Javier, zvimwe chete zvinoitika kwandiri uye handina mhinduro, mumwe munhu angatibatsira here?
Ndine maviri ekunze ma disks: imwe muFAT32 uye iyo nyowani yandakaronga kuti ive ExFAT. Ini ndinoshandisa zvese Mac neWindows uye ndinoda ma discs kuendesa info uye kuona mafirimu.
Dambudziko rangu roga nderekuti kana ini ndikateedzera ruzivo kudiski ndobva ndaridzima, iro dhisiki RINOGONESA RINONYANYA, rinoramba richindiratidza se "Rakashandiswa" 50gb kunyangwe ndadzima mabhaisikopo, saka ndinorasikirwa neakawanda disk dhisiki. Mumwe munhu anogona kundiudza izvo zvakafanira uye zvandinofanira kuita? Ndokutenda zvikuru!
Ini ndatenga Mac uye ini ndaronga mafomati maviri akaomarara kuExtFat uye ikozvino iyo Samsung TV haina kuvaverenga. Pane chero munhu akagona kuzvigadzirisa?
Iñaki Goñi Mubayiro akadaro
Iwe wakave nechokwadi chekuburitsa marara paMac neDisk yakabatana. PaMac Os, chero bedzi usingaiburitse, iyo yakadzimwa data iri "mumarara" inoramba iri pane diski kusvika iwe waiburitsa. MuWindows, kana iwe ukadzima kubva kune yekunze dhiraivha, inobvisa "zvine mutsindo".
Pindura Iñaki Goñi Salort
Ndine matambudziko aya + kusapindirana nemawindows uye linux kunyangwe ndiri paExpFat kana Fat32 uye hazvindibvumidze kupatsanura chero. Ini munguva pfupi yapfuura ndakagadzirisa PowerPC G5 yangu yekare (kuLeopard kubva kune tiger ine pendrive) uye ndiri kuishandisa chete kupatsanura nekuomesa mapendende akamira kushanda nemazvo. Izvozvi ini ndinongoita izvi kubva kune PowerPc kana kubva kuLinux (gparted ...), zvese zvinongonditendera Fat32 uye kwete ExFat.
Mhoroi, ini ndichangobva kuumbiridza iyo USB flash drive muExpFat fomati uye zvakadaro mafaera ane mp4 kana .fat yekuwedzera haandibvumidze kuteedzera-kunama. Muchina uyu ndiMacbook Pro ... Chii chandingaite?
Chii chinonzi schema uye ndechei? Uye ndeapi masikirwo atinotora kana tichiumba chinyoreso muEFFAT?
Mhoroi munhu wese, neNTFS ndinogona kuchengetedza USB yangu nemvumo dzekuchengetedza, asi neiyo xfat system ini handigone kupa chengetedzo kune USB, pane chero munhu anoziva nzira yekupa chengetedzo kune xfat system ???
Pasi rechitatu akadaro
Mhoroi, maita basa neruzivo rwakazara urwu. Asi ikozvino. Ndine usb yangu 3.0 yakamisikidzwa ku exFat, iine .avi uye .mkv mafaera, uye ini ndinoedza kutarisa mabhaisikopo pane bluray, uye haina kuiziva.
Kwaziso, Can bootable MAC kana Windows OS PenDriver inogona kugadzirwa uchishandisa iyi exFAT fomati? Kana isu tichida kugadzira DOS boot muPendrivar yeWindows 7, inotsigirwa ne exFAT partitions?
Pindura kuna AngelP
Kevin garcia akadaro
Ndine nyaya yandisingakwanise kuwana yekugadzirisa.
Ndine 64gb usb, asi nekuda kwechimwe chikonzero windows komputa inongozvimisikidza iyo kuAccount mune fat300 fomati
ikozvino mac, inoita zvimwe chete kwandiri ini handizive kuti sei, kunyangwe kana iri 64gb, inongori fomati yeAcute uye inosara yasara isina chinhu.
Iye zvino ndine dambudziko rakakomba, fomati iyo usb muASFP modhi uye kana ikatora iyo 64gb, chinhu chakashata ndechekuti ikozvino ini handina sarudzo yekuchinja neimwe nzira kudzokera ku exfat, nei ?????
Pindura kuna Kevin Garcia
HomePod firmware inoratidza Apple TV ine 4k rutsigiro neHDR 10 uye Dolby Vision
AirPods nguva yekutumira yakaderedzwa kusvika kumavhiki mana